Daawo Muuqaal :Ruushka oo lagu helay Qiyaano & Dambi weyn iyo Caalamka oo guud ahaan ku kacsan !! | Gaaroodi News
Daawo Muuqaal :Ruushka oo lagu helay Qiyaano & Dambi weyn iyo Caalamka oo guud ahaan ku kacsan !!
GRDI Baaritaano Caalami ah oo ay ka qeeyb qaadanayeen wadamo dhoor ah ayaa 2 sano ka dib waxaa la soo bandhigay Cadeeymo buuxo ka dib markii la soo ogaaday Ruushka inay soo rideen Diyaaradii reer Malaysia ee hawada dalka Ukraine lagu soo dul riday .
Shacabka ama Rakaabka saarnaa diyaaradaan ayaa tiradooda waxaa lagu sheegay 283-qofood oo rakaab ah iyo 15-Qof oo ka mid ahaa Shaqaalihii Diyaarada . Dadka ku halaagsamay xasuuqaan ayaa intooda badan waxay u dhasheen dalka Holland .
Diyaaradaan oo magaceedu uu ahaa MH17 waxaa laga lahaa dalka Malaysia waxeeyna ka duushay garoonka Diyaaraha Amsterdam ee caasimada dalka Holland taas oo ku sii jeeday caasimada wadanka Malaysia ee Kuala Lumpur .
Baarayaashii shilkaan baarayay oo xitaa ay ku jireen qaar ka socday dalka Ruushka ayaa waxa ay heleen cadeeymo buuxo oo muujinaya Ruushka oo Diyaaradaan gantaal ku soo riday xili uu caawinayay maleeshiyaadka mucaaradka dalka Ukraine .
Codadka ciidamadii Ruushka ahaa ee diyaaradaan soo riday 17-kii bishii Juulay sanadkii 2014-kii ayaa dhamaan la soo helay waxeeyna isku dayeen , in qaar ka mid ah qalabkii bur buray ee Diyaaradaan ku qariyaan gudaha dalka Ruushka si aanan loo helin xogta ama Gantaalka soo riday diyaarada MH17 dalka laga leeyahay iyo ciidanka soo ridayba .